एउटै परिवारका ५ जना झु’ण्डिएको अवस्थामा मृ’त फेला परपछि… – PathivaraOnline
Home > समाज > एउटै परिवारका ५ जना झु’ण्डिएको अवस्थामा मृ’त फेला परपछि…
एउटै परिवारका ५ जना झु’ण्डिएको अवस्थामा मृ’त फेला परपछि…
admin August 24, 2020 समाज	0
काठमाडौ । एउटै परिवारका ५ जना झु’ण्डिएको अवस्थामा मृ’त फेला परेका थिए । प्रहरी पुग्नु अगाडी नै उनीहरुको निधन भइसकेको थियो । भारतको मध्यप्रदेशस्थित एक घरका पाँच जना सदस्यको उनीहरुकै घरमा झु’ण्ड्या एको अवस्थामा मृ’त फेला परेका छन् । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ । परिवारका सबै सदस्यलाई झु’ण्ड्य इएको भन्ने सूचनाका आधारमा गएको प्रहरीले उनीहरुलाई मृ’त फेला पारेको हो ।
आइतबार राति सो घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । ती सबै शवलाई प्रहरीले अहिले पो’ष्टमा’र्टमका लागि पठाइएको जानकारी दिएको छ । उनीहरु एकै घरका परिवार रहेको जानकारी छिमेकीले दिएका छन् भने त्यसरी ज्यान लिनुको कारण खुल्न सकेको छैन । प्रहरीले अहिले सम्म कसैलाई प’क्राउ समेत गरेको छैन ।
भारतीय प्रहरीका अनुसार यस घटनाको ‘फोरेन्सिक साइन्स ल्याब’का अधिकारीहरुको सहयोगमा अनुसन्धान भइरेहको र अनुसन्धानपछि त्यो घटना किन र कसरी भएको हो भन्ने बारेमा पत्ता लाग्ने छ । भारतीय राज्य मध्यप्रदेशको टिकमगर जिल्लामा सो घटना भएको हो । आइतबार राति घरका सबै जना सदस्यलाई झु’ण्ड्याएर ज्यान लिइएको भन्ने खबर पाएर गएको प्रहरीले उनीहरुलाई बचाउन सकेन ।
प्रहरी पुग्दा उनीहरुको निधन भइसककेो थियो । टिकामगर जिल्लाका एसपी प्रशान्त खरेले घटनाको अनुसन्धान सुरु भएको बताएका छन् । खरेले सञ्चारमाध्यमहरुलाई आफूहरुले वैज्ञानिक रुपमा यसको अनुसन्धान गर्ने र सबै तथ्य अनुसन्धानपछि पत्ता लाग्ने बताएका छन् ।
उत्तर कोरियाली नेता किमको निधन भइसकेको समाचार बाहिरियो, उनका बहिनी सत्तामा
करिश्मा किन भइन् यसरी आक्रोशित, सामाजिक संजालमा ल्यायो तरंग!
उफ्! के हुन लागेकाे यो नेपालमा? फेरि माइतीबाट फर्केकि महिला बलात्कृत, मार्न खोजिएपछि…